Banyere Tekna Hyperbaric - Hyperbaric Oxygen Therapy HBOT
Banyere Tekna Hyperbaric
Home/Banyere Tekna Hyperbaric
Banyere Tekna Hyperbarictekna_mod2018-01-04T17:19:53+00:00
Banyere Tekna Hyperbaric Ụlọ
Tekna bụ Onye na-ewu ewu nke Monoplace na ọtụtụ ụlọ Hyperbaric.
Tekna na-enye Sales, Service, na Ọzụzụ na Hyperbaric Oxygen Treatment. [HBOT]
Tekna bụ Hyperbaric Oxygen Therapy Chamber OEM.
Tekna nwere ụlọ ọrụ Injinịa 3D CAD / CAM / FEA n'ụlọ, yana ụlọ ahịa ASME / PVHO na-arụ ọrụ, na Ngalaba Ntanetị na Nlekọta Iwu. Anyị na-agbanye efere efere nke ígwè n'ime nsị ụgbọ mmiri.
Na azụmahịa kemgbe 1989, ndị kere TEKNA abuana mmiri na-agba mmiri ebe ọ bụ na 1973 na ọgwụ hyperbaric kemgbe 1976.
Usoro klaasị anyị na Klaasị B HBOT bụ FDA 510 (k) kpochapụrụ kemgbe 12 / 07 / 2000 na arịa nrụgide anyị nile bụ ASME, National Board, na NFPA-99 na PVHO-1 iwu kwadoro. Usoro klas C anyị bụ ASME na NFPA na-akwado iwu mmezi ọhụrụ.
Enweta uru zuru ezu n'izụta site na TEKNA bụ na anyị bụ naanị OEM nke na-emepụta nchịkọta ahụike ahụ (ndị na-abụghị ndị lubricated) nke e mere maka HBOT.
Uru ndị ọzọ gụnyere: atụmatụ omenala, nnyefe na nwụnye n'ụwa nile, ọzụzụ na-arụ ọrụ, na ọtụtụ usoro ọzụzụ na ịmekọrịta ndị ọzọ.
TEKNA na-enye POCD (isi ihe osise), ya mere, ị nwere ike ịnye ụlọ ọrụ gị ka ịmepụta ụlọ nwere ọnụ ụlọ, anyị ga-enyekwara gị aka ịchọta ọnụahịa kacha mma na ngwongwo gas na ọgwụ na mmiri ọgwụ.
FSS (fire suppression systems) na-eme ka mmiri mmiri jupụtara na vinyl epoxy na-ejikarị aka na-ekpochapụ ajari.
TEKNA ga-arụ ọrụ nhazi ọ bụla kwa izu na nkwụghachi azụ na ọnụ ọgụgụ dị mma.
Anyị na-atụ anya isoro gị rụọ ọrụ.